चेतना – Education Awareness
पूर्व प्रेमी/प्रेमिकाका लागि रुँदा तौल घट्छ १९ बैशाख २०७६, बिहीबार ०७:०२
च्यार्लोट, १८ बैशाख । एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा १६.५ ग्यालोन आँसु झार्ने अनुसन्धानकर्ता बताउँछन् । तर कहिलेकाँही मानिसहरु आफ्नो भावनालाई दबाउन खोज्छन्, यसलाई उजागर गर्न लजाउँछन् पनि । तर यदि भावनात्मक रुवाईले तपाईंलाई तौल घटाउन सहयोग गर्छ..
चट्याङ पर्दा नगर्नुहोस यस्ता काम २६ चैत्र २०७५, मंगलवार २१:५५
काठमाडौं, २६ चैत । आजकल दिनहुँ जसो चट्याङ् लागेर मानिसको मृत्यु भएको खबर सुन्नमा आउँछ । हावा हुरी चल्दा, पानी पर्दा प्राय चट्याङ् पर्ने गर्दछ । चट्याङबाट मानिस मात्रै नभएर घरपालुवा जनावरहरुको पनि ज्यान पनि गएको छ । तर यसरी चट्याङ परेको बेलामा..
सन्दर्भः १६ दिने महिलाहिंसा विरुद्धको अभियान बाँच्न पाउने अधिकार गुमाउँदै १० मंसिर २०७५, सोमबार ०८:२२
काठमाडौँ, १० मङ्सिर । गत साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । त्यसलगत्तै गत असोज १० गते पोखराकी १० वर्षीया बालिका श्रीया विकको बलात्कारपछि हत्या भयो । बलात्कारपछि हत्या गरेर आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकार गुमाएका..
बहिरालाइ समेत काममा लगाउन ब्यबसायी १३ आश्विन २०७५, शनिबार २१:५२
बागलुङ, १३ असाेज । जिल्लामा फरक क्षमता भएका बहिरा ब्यक्तिहरूलाइ कसरी ब्यबसायीक काममा लगाउने भन्ने बारे बागलुङ उद्योग बाणिज्य संघले जिल्लामा सराेकारवाला निकाय बिच बागलुङ उद्योग बाणिज्य संघमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बागलुङ..
आफ्ना बच्चालाई नहप्काउनुस, रोगी हुन सक्छन ६ भाद्र २०७५, बुधबार २१:२८
काठमाडाैँ, ६ भदाै । हरेक आमाबुवा चाहन्छन्, आफ्नो सन्तान राम्रो होस् । सुखी होस् । खुसी होस् । स्वस्थ्य होस् । तन्दुरुस्त होस् । फुर्तिलो होस् । सक्रिय होस् । यस्तो शुभेक्षा राख्नु स्वभाविक हो । किनभने बालबालिका भनेको भोलिको भविष्य हुन् । त्यही..
विवाह गर्दै हुनुहुन्छ ? असल जीवनसाथी कसरी छान्ने ? ५ भाद्र २०७५, मंगलवार २१:४४
काठमाडाैँ, ५ भदाै । जुनीभरको लागि एक अर्काको सुख दुःखमा साथ दिइ सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खाँदै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनुलाई हाम्रो सँस्कृतिमा धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ । पश्चिमा सँस्कृतिमा विवाहको केहि समयपश्चात नै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने,..
औषधीय महत्व पनि छ, तुलसी प्रयोगमा थाहा पाउनुहाेस् ८ श्रावण २०७५, मंगलवार ११:५५
काठमाडाैँ, ८ साउन । तुलसी औषधिय गुणले भरिपूर्ण बनस्पति । धेरैको घर आँगनमा त तुलसी रोपिएकै हुन्छ । आर्युवेदमा यसको खास महत्व छ । त्यसैले तुलसीलाई पूज्ने गर्छौ, जो मानव स्वास्थ्यका लागि अति लाभदायक मानिन्छ । तुलसी जाडो याममा निकै उपयोगी हुन्छ ।..
वास्तु अनुसार,पतिपत्नी कसरी सुते सम्बन्ध राम्रो ? जानी राखौ ३ श्रावण २०७५, बिहीबार २०:४८
काठमाडाैँ, ३ साउन । श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा तनाव छ भने यसमा तपाईहरुबीचको सम्बन्धले मात्र काम गरेको हुदैन । दुईजनाबीचको असमझदारीका कारण यस्ता समस्या आउनुको एउटा प्रमुख कारणमा वास्तु दोष पनि रहेको बताइन्छ । जसको हलका लागि तपाईले वास्तुका..
बुधबारदेखि ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ १ श्रावण २०७५, मंगलवार २२:५६
काठमाडौँ, १ साउन । बुधबारदेखि जनतासँग प्रधानमन्त्री टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । नेपाल टेलिभिजनबाट र एबीसी टेलिभिजनबाट ९ बजे एक साथ कार्यक्रम प्रसारण हुनेछ । कथा नेपालले निर्माण गरेको कार्यक्रमको संचालन मनोज पाण्डेले गर्नेछन् ।..
अब श्रिमानले चाहे पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने ३१ असार २०७५, आईतवार २३:०८
काठमाडौं, ३१ असार, । के तपाईं श्रीमतीबाट पीडित हुनुहुन्छ ? जीवनभरि पीडित भएर पनि रुीमतीले सम्बन्ध विच्छेद नगर्दा मानसिक तनाव झेलिरहनुभएको त छैन ? यस्तो समस्या भएको भए आगामी भदौसम्म धैर्य गर्नुहोस्, तपाईंले आफै सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिन..